October 2017 – CRM
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာမူစလင် သိန်းနဲ့ချီ အိုးအိမ်စွန့်ခွါ ထွက်ပြေးနေရတဲ့ အခြေအနေဟာ လူမျိုးတုံးသုတ်သင်ရှင်းလင်းတဲ့ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး ဒီအခြေအနေကို လုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်း ဒီမိုကရက်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Dick Durbin က ပြောပါတယ်။ အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကို VOA သတင်းထောက် Greta Van Susteren တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ Ms. Greta – အခုလို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့် ပေးတဲ့အတွက် အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ပြုမှုပုံတွေဟာ လူမျိုးတမျိုးကို အမြစ်ပျက်ရှင်းလင်းမှု။ ဒါမှမဟုတ် လူမျိုးတုံး သတ်ဖျက်မှုလို့ ထင်လား။ အထက်လွှတ်တော်အမတ်အနေနဲ့ ဘယ်လို ယူဆလဲ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့  တရားဝင် ရပ်တည်ချက်က ဘာလဲ။ Senator Durbin – လက်ရှိအစိုးရရဲ့  […]
The United States announced it was withdrawing military assistance from Myanmar units and officers involved in violence against Rohingya Muslims that has triggeredamassive exodus. The United States announced Monday it was withdrawing military assistance from Myanmar units and officers involved in violence against Rohingya Muslims that has triggeredamassive exodus. “We express […]
Suu Kyi has donated $4,000 for development efforts in Rakhine State, in the initiative also joined by more than two dozen of the country’s tycoons and business leaders 1.9K 1.9KSHARES In her recent speech to the people across the country, Myanmar leader Aung San Suu Kyi said “no matter what difficulties the country faces, they […]